Mariazy nivadika ho zava-doza 1 no maty, 70 mahery voapoizina
Vokatra Tiko Nitombo isa indray ny botika manokana
Nisokatra nanomboka ny sabotsy 11 jolay ny M Shop Botika etsy Ampasapito, ampitan'ny gare routière.
Ady amin` ny kolikoly Nihena ny tetibola natokana ho an` ireo rafitra mpanara-maso
Tao anatin` ny fanadihadiana mahakasika ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nataon` ny firaisamonim-pirenena CCOC, dia tsikaritra fa nihena ny tetibola natokana ho an` ireo rafitra mpanara-paso (OCFP) sy ireo izay miady amin` ny kolikoly (ILCC).
Fihibohana Tsy nahitàna takaitra firy ny fambolena
Araka ny tatitry ny fanadihadiana EHTM natao ny volana jona lasa teo, 10, 1%n` ireo tokantrano no nanambara fa very asa vantany vao nanomboka ny fihibohana
Fandevenana eny Anjanahary Telo ny fangatahana voarain’ny BHM Isotry hatreto
Telo hatramin’ny alarobia lasa teo ny fangatahana nandalo teo anivon’ny BMH ( Bureau Municipal d’hygiène)
Fanondranana olona an-tsokosoko Malagasy 32 indray no saika lasa tany Mayotte
Lehilahy iray kaomandina sambokely nikasa hihazo ny Nosy Mayotte no voasambotry ny polisim-pirenena ao an-toerana ny talata 30 jona teo ary natolotra ny polisim-pirenena Malagasy 04 jolay lasa teo.
Talen’ny « Tsiko Meva Ylang » Nosy Be Nampanaovina TIG no sady nampidirina « violon »
Nanaitra ny olona ity tranga tao Nosy Be omaly ity. Teny ambony Bajaj hamonjy toeram-piasany i Jaofara Kamisy Severin, Talen’ny « Tsiko Meva Ylang FM 91 » ao Nosy Be, radio an’i Jospeh Yoland,
Antananarivo sy ny manodidina Mbola miasa ny 70%n’ny orinasa
Mbola miasa ny 70%n’ny orinasa ato Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina tsy araka ny voalazan’ny fitondram-Panjakana aza fa ny "services essentiels"
Fety no nankalazaina kinanjo tsy fahasalamana faobe sy fandevenana no natrehina. Voan’ny fanapoizinana ara-tsakafo koa ireo mpivady vao, niaraka tamin’ireo mpangataka sy fianakavian’ny tovovavy.
Iray no maty ary 70 mahery ireo narary vokatry ny fihinanana maiônezy nivadika poizina tamin’ny sakafo fanokafam-bavony tany amin’ny fianakavian’ny zazavavy, ny sabotsy maraina teo ka
voatery nentina nihazo ny renivohitra. Tao Anosivola, 6km miala an’Ankazondandy, distrika Manjakandriana no nitrangan’ny loza. Rehefa vita ny fanasana tao amin-dravehivavy, mbola nihazo
ny fankalazana ny mariazy tao am-piangonana ary efa teo am-pikenonkenonana hisakafo tao amin’ny zazalahy vao narary kibo tetsy, nandoa teroa, torana ny sasany, nangovitra ny maro. Nanapa-kevitra avy hatrany ny tompom-panasana hitondra ireo narary sy ireo nisakafo tany amin’ny tovovavy hihazo ny hopitaly taty an-drenivohitra. Ireo taraiky vao narary kosa voatery nentina kamiô. Ora telo taty aoriana vao niseho ny aretina, araka ny filazan’ny tovolahy iray izay nisafidy ny tsy hitonona anarana.
« Marary ny kibo, torana avy eo ary mangovitra, sady mandoa no mivalana, izay ny fitrangan’ny aretina. Efa nampidirina tao amin’ny hopitaly Anosiavaratra izahay, saingy tsy zakan’ny toeram-
pitsaboana tao fa fiara lehibe telo no niara-nitondra tamin’ny voalohany. Kinanjo mbola nisy narary iray kamiô koa tany an-tanàna nanaraka. Nalefa niakatra taty amin’ny HJRA izahay ary tsy tafiditra
tao daholo ka nalefa teny amin’ny hopitalibe Befelatanana. Tsy omby koa tao ka nalefa teny amin’ny manara-penitra Andohatapenaka”. Raha ny filazan’ny fianakavian’ireo marary anefa, tsy nisy nety nankeny Andohatapenaka izy ireo, noho ity toeram-
pitsaboana farany izay heverina fa tsizarizary. Marary 20 sisa tsaboina amin’ireo hopitaly roa omaly tolakandro fa tsy misy ahiana ny ainy, ao anatin’izany ireo mpivady vao. Tsy azo ny vaovaon’ny
mpitsabo noho ny mpiandraikitra tsy miasa alahady.